Allgedo.com » 2012 » September » 15
Home » Archive Daily September 15th, 2012
Qaar ka mid ah Shaqaalaha Madaxtooyada Soomaaliya oo ku eedeysan xatooyo dekumintiyo muhiim u ah dowladda iyo ka ganacsiga Visaha Turkiga.
Mursal Saneey waa Madaxa Paratakoolka Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, waa ninka fashiliyay in munaasabad weyn oo caleema saar ah loo sameeyo Madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo si lama filaan ah oo aan ka fiirsasho laheyn ugu dhowaaqay Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari isagoo aan kala tashan hey’adda sida rasmiga ah howshaasi ugu xilsaaran dowladda, misana...
Madaxweynaha maamulka Puntland C/raxmaan Faroole oo isku shaandheen kusameeyay wasiiradiisa.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/raxmaan Faroole ayaa isku dhaandheen maanta ku sameeyay wasiirada maamulkaasi ka dib wareegto kasoo baxday xafiiskiisa.; Wareegtadaan ayaa xilka waxaa ku waayay wasiiro, Ku xigeeno iyo sidoo kale wasiiru dowlayaal oo maamulka Puntland ah, waxaana xilal helay wasiiro kale oo cusub. Read More →
Qarax maanta ka dhacay degmada Mandheera ee gobalka Waqooyi bari Kenya.
Qarax Miino ayaa maanta ka dhacay degmada Mandheera ee gobalka Waqooyi Bari Kenya waxaana qaraxa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda Kenya oo meel wado ah maraayay. Mid ka mid ah askarta wadanka Kenya ayaa halkaasi ku geeriyooday mid kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray ka dib markii Miinada aysi lama filaan ah askartaasi ugu qaraxday. Dadka shacabka ee ku dhaqan degmada Mandheera ayaa u sheegay warbaahinta...
Ka dib dagaaloculus oo maalmahaan dambe ka soconaayay deegaanoka mid ah gobalka Jubada Hoose, una dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaaya Kenya iyo Xarakada Al-shabaab oo dhan ah, ayaa saraakiisha dowladda waxay sheegeen inay la wareegeen degaanka Biibi ee gobalka J/hoose. Saraakiisha dowladda Soomaaliya ee jooga Gobalka J/hoose waxay maanta saxaafadda u sheegeen inay la wareegeen deegaanka...
Wafdi ka socda QM oo maanta Muqdisho kula kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud (Sawiro)
Wafdi ka socday Qaramada Midoobay ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay kulamo kula qaateen madaxweynaha Jamuuriyadda Fedaraalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wafdigaan oo uu hogaaminaayay ku xigeenka Kaaliyaha Qaramada Midoobay u qaabilsa Soomaaliya ayaa waxay soo gaareen mnaanta magaalada Muqdisho, waxaana xarunta Madaxtooyada ay kula kulmeen madaxweynaha Soomaaliya. Kulanka waxa uu ahaa mid...
Luuq, Somalia (AOL) – Banaanbaxan oo ahaa mid aysoo qaban qaabiyeen Maamulka Dowlada ee Degmada Luuq ayaa ahaa mid lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu ka dhacay ayaa ka dhacay Banaanka hore ee Saldhiga Booliska degmada Luuq, halkaasi oo mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka degmada ay kula hadleen Boqolaal dadweyne ah oo socod dheer ku soo marey...